ऑक्सिजनOS ११ मोबाइलको साथ एक हातको प्रयोगको लागि अनुकूलित भएको छ Androidsis
यसैले वनप्लसले आफ्नो मोबाइलहरूको उत्तम एक हात उपयोगको लागि ऑक्सीजनस ११ लाई अनुकूलित गरेको छ
१:: format ढाँचाको कारण बढ्दो लामो टेलिफोन र यसले हामीलाई आफूले गरेका केही अवलोकनहरू भन्दा अघि बढ्न सिकाउँछ। OnePlus राम्रो ह्यान्डलिंग को लागी ऑक्सीजनOS 11 लाई अनुकूलन गरी उनीहरूको मोबाईलबाट एक हात।
र सत्य यो हो कि इन्टरफेस एक फोन अन्तर्क्रिया को एक नयाँ तरीकामा अनुकूल छ, र यसले हामीलाई ठूलो आरामको लागि एक हात प्रयोग गर्न डो leads्याउँछ। तसर्थ, हामीसँग एक यूआई बढ्दो छ र सबै चीज "तल" राख्न अनुकूल छ; हामीले भर्खर कसरी हेर्ने हो फायरफक्सले आफ्नो ब्राउजरलाई पूर्ण रूपमा सुधार गरेको छ त्यो भागमा URL को लागि फिल्ड ल्याउन।
1 यो कसरी ऑक्सीजनस 11 एक हात उपयोगको लागि अनुकूलित गरिएको छ
2 ईन्टरफेसमा परिवर्तन गरियो
यो कसरी ऑक्सीजनस 11 एक हात उपयोगको लागि अनुकूलित गरिएको छ
पछिल्लो अगस्टको सुरूमा वनप्लसले एन्ड्रोइडको पछिल्लो संस्करणको बीटा अनावरण गर्‍यो वनप्लस users प्रयोगकर्तालाई। यो केहि घण्टा अघि जब उनले टिप्पणी गरे अक्सिजनस ११ लाई राम्रो कस्टम लेयरमा परिणत गर्नका लागि गरिएको केही अवलोकनहरूमा यसको नयाँ डिजाइन भाषाका लागि धन्यवाद।
पाठ्यक्रममा रूपान्तरण गरिएको छ, त्यो नियन्त्रणको लागि हामी अब फोनलाई एक हातले लिएर थम्ब प्रयोग गरेर यहाँबाट प्राप्त गर्नका लागि मार्गनिर्देशकको रूपमा गर्छौं। त्यहाँ मोबाइलको विस्तारको साथ; एउटा बढ्दो विस्तारित जसको अन्तमा पुग्न धेरै खर्च लाग्छ, त्यसैले हामीले द्रुत पहुँचको लागि अर्कोतर्फ आफूलाई समर्थन गर्नुपर्दछ।
ग्यारी सी।, वनप्लसका उत्पाद प्रबन्धक, वर्णन गर्दछ कसरी वनप्लसले डाटाको विश्लेषण गर्दा एउटा प्रणालीको डिजाइन गर्न सक्थ्यो जुन एक हातको प्रयोगसँग सहज थियो। केही प्रारम्भिक डाटा मध्ये यो पाउन सकिन्छ कि कसरी 65 XNUMX% प्रयोगकर्ताहरूले सानो हेडरलाई प्राथमिकता दिन्छन्, जबकि %०% उपशीर्षकहरूको साथ अधिक हेडलाइन्समा थप फालिन्छ.
यस डाटाको आधारमा, वनप्लसले हाइरार्की डिजाइन गरेको कोरिएका क्षेत्रहरू पूर्ण रूपमा हेर्न सक्दछन् जसमा यो देखाइन्छ कि उनीहरूसम्म पुग्न कति सहज, मध्यम वा गाह्रो छ। त्यो हो, द्रुत पहुँचको लागि अर्को हात प्रयोग गर्नु अघि स्क्रिनको एक अंशसम्म पुग्न यसले तपाईंको ठूलो पैतालाको पैतालामा के खर्च गर्न सक्दछ।
ईन्टरफेसमा परिवर्तन गरियो
फलस्वरूप, ऑक्सीजन 11 टच नियन्त्रणलाई ती क्षेत्रहरूको नजिक सार्नुहोस् जसमा हामी हाम्रो ठूलो औंलाको साथ पुग्न सक्दछौं यसलाई बढि ताण्न बिना। अर्को शब्दमा, हामी अब कुरा गरिरहेछौं जब हामी मेनू खोल्छौं नियन्त्रणहरू तल ल्याइएको छ; यहाँ हामी याद गर्छौं कि फायरफक्सले माथिल्लो बारमा के गर्यो जुन तल सारियो।
तपाईं यसलाई नयाँ बटनमा पूर्ण रूपमा देख्न सक्नुहुनेछ क्यामेरा अनुप्रयोगमा लगियो र त्यो द्रुत सेयर बाहेक अरू कुनै होइन; त्यो हिजो हिजो गुगलले विश्वव्यापी सुरुवात गर्‍यो। अब, जब लिइएको तस्बिरको थम्बनेलमा लामो प्रेस बनाइन्छ, द्रुत सेयरको लागि बटनमा तल देखा पर्दछ जुन प्रयोगकर्ता अन्तर्क्रियामा सहयोग गर्दछ।
हामीसँग पनि छ वनप्लस मौसम अनुप्रयोग जुन पुनः डिजाइन गरिएको छ ती सिद्धान्तहरूलाई दिमागमा राख्दै र एक इन्टरफेसको साथ जुन बीटामा डिप्लोय हुँदै छ।
यो समाचारहरूको श्रृंखला र हामी अधिक अक्सिजन ओएस ११ अनुप्रयोगहरूमा देख्नेछौं तिनीहरू जवाफमा जान्छन्, जैसा कि हामीले भनेका छौं, ती टेलिफोनहरूमा प्रत्येक पटक १ 18: of को ढाँचा बढि ठूलो भयो। समस्या वास्तवमै साना हात भएका ती मानिसहरूसँगै छ, त्यसैले उनीहरूले खिचेको ठाउँमा सबैभन्दा नयाँ उच्च कोटिको लागि अप्ट इन गर्न गाह्रो हुन्छ।
हुनसक्छ यो गर्नुहोस्, इन्टरफेस को रूपांतरण को लागी मोबाईलहरु आफैले बाध्य पार्छ र जसले हामीलाई अझ राम्रा स्क्रीनहरुको आनन्द लिई सबै चीज छिटो ह्यान्डल गर्न दिन्छ। A OnePlus काम गरीरहेको छ तपाईंको पहिरिन योग्य मा, वनप्लस स्मार्टवाच.
लेखको पूर्ण मार्ग: एन्ड्रोइडसिस » हाम्रो बारेमा » यसैले वनप्लसले आफ्नो मोबाइलहरूको उत्तम एक हात उपयोगको लागि ऑक्सीजनस ११ लाई अनुकूलित गरेको छ
गुगल नक्शाले सडकहरूमा ट्राफिक बत्तीहरू देखाउन सुरू गर्दछ